टीकापुर घटनाका नाइके रेशम चौधरीले चुनाव जितेपछि प्रहरीले के गर्छ ? - Dainik Nepal
टीकापुर घटनाका नाइके रेशम चौधरीले चुनाव जितेपछि प्रहरीले के गर्छ ?
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर २४ गते १२:४०
धनगढी, २४ मंसिर । प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी कैलाली १ मा चुनाव जित्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रहरीको मोस्ट वाण्टेट सूचीमा रहेका चौधरीविरुद्ध अदालतमा तीन वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । तर, उनी फरार रहेकाले कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन् । यस्तैमा राजपा नेपालबाट कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका चौधरीको चुनाव जित्ने अवस्था देखिएको छ ।
उनले चुनाव जित्ने अवस्था देखिएपछि कैलालीबासीमा चिन्ता छाएको छ । उनीहरुले हत्याराले चुनाव लागेको भन्दै अब के हुने हो ? प्रहरीका हत्याराले उन्मुक्ति पाउने त होइन भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । चोक चोकमा अहिले यही चर्चा भइरहेको छ ।
यसरी रेशम चौधरीको बारेमा नागरिकमा देखिएको चिन्ताको जवाफ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दिएको छ । कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विनोद घिमिरेले रेशमले चुनाव जितेपनि उनलाई पक्राउ गरिने स्पष्ट पारे । ‘चुनाव जिते पनि प्रहरीको नजरमा सबै अपराधी समान हुन् । फरार रहेका रेशमलाई बाहिर आउनेवित्तिकै समात्छौं ।’
२०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर भएको हिंसात्मक घटनामा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षिय बालक टेकेन्द्र साउदको हत्या भएको थियो । त्यो घटनाको मुख्य योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरी रहेका छन् । तर, घटना भएदेखि (२७ महिना) उनी फरार छन् ।